HomeAfaan OromooWARRAAQSA GALAANA UUMMATAA!
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo(QBO) irraa haala yeroo waliin walqabsiisuun kenname.
Qeerroo bilisummaa Oromoo! Uummanni Oromoo qabsoo isaa qofaan bilisa ba’uu danda’a.
Akeeka uummata Oromoo qabatee, Adda Bilisummaa Oromoo ABO WBO jala hiriiruun garbummaa jaarraan lakkaa’amu kan uummata Oromoo irratti fe’amee sochii jiruuf jireenyaa uummatichaa irratti dhiibbaa guddaa taasisaa jiru qaarisiisuuf qabsoo karaa nagaa gochaa turuun Qeerroo Bilisummaa Oromoo hundaaf ifaadha.
Jaarmiyaan Qeerroo Bilisummaa Oromoo Bara Oromiyaa keessatti hundeeffameen as, gaaffii karaa nagaa uummatasaa bakka bu’uun gaafataa turu illee, dursitootni impaayerichaa deebii karaa nagaa gaafatame karaa afaan qawwee akkasuma hidhaaf dararaan dargaggoo, Shamarran, jaarsaafi jaartiin osoo hin hafiin uummata Oromoo akkasuma sabaaf sab-lammoota impaayerattii hacuuccaa jala jiran irraan geessisuun dadhabsiisuu yaalan illee sochiin qeerroo bilisummaa oromoo duubatti deebii utuu hin yaadin garboonfataa ittuu raasee sadarkaa dhabama taasisuu irraan gahee ture.
Bu’aa qabsoo Qeerroo bilisummaa sadarkaa murteessaarra gahee ture kana Of fakkeessitootaafii Ayyaanlaallattootni gara dabarsanii injifannoo dhiigaafi lafee ilmaan Oromoo xiqqaafi guddaa osoo hin jenne itti cabee bu’aa warraaqsa qeerroo bilisummaa oromootiin dhufe afaan bineensaa waan kaa’aniif garbummaan Ammayyoomee uummata oromoo ciniinee qabee wareegama ulfaataa kaffalchiisuu eegale.
Sirnoonni garaa garaa imphaayera kolonii kana hoogganaa turan kan raawwatanii hin beekne waggaa lamaan kanaan as ammoo sirni Ayyaanlaallattootaan dahatee fekkeessitootaan dabaalamee aangoo imphaayera kana hoogganuu argate ammoo Sarbiinsa mirga namoomaa sirnoonni imphaayera kana hoggananii darban kamiyyuu raawwatanii hin beekne kanneen suukkanneessoo ta’an sirna faashistii Impaayera kolonii Itiyoopiyaa Mootummaa ‘pp’ ofiin jedhu kan gochi faashistummaa isaa tilmaama hin qabne impaayera kana keessatti waan sirni kamuu raawwatee hin darbine raawwachuu itti fufe.
Safuufi aadaa uummataa cabsuun manaafi tuullaa midhaan qotee bultoota hedduu gubuun dirreetti hambisee beela hamaafis saaxilee jira. Manni da’oo ilma namaa maraati. Midhaannis Soorata ilma namaa hundaati. Oromoo biratti manas ta’u midhaan gubuun safuudha
Ulfa haadha lubbuu lamaatti qiyaafatuun ajjeesuunis humna faashistii koloneel Abiy Ahmedin durfamuun raawwatamee jira! Kana malees xayyaara lolaa fayyadamuun boonbii qabeenya uumamaa fi qe’ee uummataatti roobsuufi Uummata ittiin haleelanii horiin uummataa bineensaaf soora ta’uu bira dabartee ilmi namaa soora bineensaa ta’e. dubartoota gudeeduu ilmoo ajjeesanii haadha reeffa ilma ishii irra teessisuu walumaa galatti yakka ilma namaa irratti raawwatamee hin beekne sirni kun uummata oromoo irratti raawwate.
Yeroo jalqabaatiif seenaa biyya kanaa keessatti “chemical weapon” fayyadamuun bineeldota bosonaa dhabamsiisuu irratti hojjechuufi gochoota kkf raawwachuun seenaa biyya kanaa keessatti xurii seenaa dhiqamee hin baane raawwatanii darbanii jiru!
Yakki kun sadarkaa hammaataa ilaaluufi dhaga’uun kan nama qaanessuufii jireenya ofii kan nama jibbisiisutti cehee jiraachuun isaa wal nama hin gaafachiisu kanaaf nuti akka QBO tti Gaaffilee armaan gadii kana mootummaan karaa nagaan akka nuuf deebisu gaafanna.
Labsiin yeroo hatattamaa seeraafi heeraan hin deeggaramne Oromiyaafi Oromoo irraa hatattaman akka kahu.
Waraannii rayyaa ittisaa biyyaafi humni addaa polisii Oromiyaa dhiyeenya leenjifamanii ba’anii Oromoofi Oromiyaa balleessuuf bobbaafaman hatattamaan moraatti debi’anii badii isaan geessisaniif mootummaan itti gaafatamuu qaba.
Lubbuu Uummata keenyaa godinoota, Oromiyaa hundatti ajjeefamaniifi qabeenya gubateef mootummaan beenyaa Kennee, qabiinsa yakka kanaaf immo qaamni yakka kana raawwate gaafatamuu qaba.
Mootummaan amma aangoo irra jiru kun jalqabumayyuu filannoon osoo hin taane saamichaafi hannaan waan dhufeef inumaayyu murni amma “bilstiginna” jedhamu kun qabsoofi wareegama qeerroofi qarree Oromoo haaluun diina innikkaa ta’ee qeerroofi qarree gidduutti garaagarummaa uumuuf ifaajjii guddaa taasisaa turuufi itti jiraachuun isaa ni beekamaa. Kanaaf murnii kun immoo ammas seera malee yeroo aangoo isaa dheereffachuuf yeroo filannoo Dheeressaa jira. Nuti QBO mootummaa kana filannoon ofirraa buusnee mootummaa ofiin filanneen buluu waan feenuuf filannoon kun taasifamuu qaba, yoo filannoon darbe garuu ji’aa hagayyattii dhaabonni Oromoo ABO,KFO fi PBO akka Oromiyaa bulchuu qaban gad jabeessinee hubachiisuu barbaanna.
Haluma kanaan mootummaan dhimmoota kana irraatti hanga gaafa guyyaa June 7/6/2020tti deebii akka nuuf kennu gaafanna.
Mootummaaf:- Mootummaan hanga guyyaa jedhameetti gaaffiilee karaa nagaa gaafatameef deebii hatattamaa kennuu dhiisee gochaalee gara jabummaa tokkollee Qeerroo Bilisummaa Oromoo(QBO) irratti fudhachuu yoo yaale Qeerroofi tumsa Warraaqsa galaana uummataa tarkaanfilee armaan gadii akka fudhannu isin hubachiisuu feena.
Garboomfataa hundeen buqqisuufi Gaaffii mirgaa gaafanneef deebii sirrii argachuuf Hanga guyyaa kennameetti deebii isaa hin argannu taanaan guyyaa june 8/2020 Eegaluun”Warraaqsa Galaana Uummataa” dhaadannoo “Oromoon Galaana irra dhangalaana” jedhuun tarkaanfilee barbaachisoo ta’an garboomfataa irratti fudhachuuf murteessineerra.
Caasaa garboomfataa diiguu
Eegdota imphaayera kanaa gubbaa hanga gadiitti tarkaanfii gitaa irratti fudhachuu.
Qabeenya garboomfataa barbadeessuu
Sochii hin barbaachifne kanneen akka kallattii diinni irra jireessaan irra imalu kutuu
Kallattiidhaan haala miidhaa hawaasaa hir’isuu danda’uun garboomfataa nagaa dhorkuufi biyya ofii irraa buqqisuuf ganamaafi galgala osoo hin jenne hojjechuufii k.k.f haalduree barbaachisoodha jedhu lafa kaawwachuun gara hojiitti seenuuf QBO qophiisaa xumuree jira.
Ilmaan Oromoo dhiigaan Oromoo taatanii hojiin diina uummata Oromoo waliin Oromoorratti badii dalagaa turtaniifi jirtan hundaaf Qeerroon bilisummaa oromoo waamicha gara saba keessaniitti akka deebitaniifi, gocha kaleessaa farrummaa keessan ibsattanii ceephoo akka buufattan akka gara qabsoo saba keessaniitti deebitan isiniif dhiyeessa.
Akkasuma ilmaan Oromoo meeshaa garboomfataa baattanii gubbaa hanga jalaatti jirtan maraafis dhiigaan Oromoo taatanii diinaaf dalagaa jirtan martuu gara qabsoo Oromootti akka deebitan waamicha keenya kabajaa isiniif dhiyeessinee jirra.
Uummata sabaaf sab-lammii Oromiyaa keessa jiraattan martuu qabsoo uummanni Oromoo geggeessuuf jiru keessatti isinis akka hirmaattan waamicha isiniif dhiheessina. Oromoon sabaaf sab-lammii ofkeessaa baasuuf qabsaa’a osoo hin taane biyya isaa ijaarratee saba isaa bilisoomsuuf qabsaa’a, mirgi dhala namaa kamuu akka sarbamu hin fedhu. Kanaaf qabsoon Oromoon godhu sabaaf sab-lammii kamiifuu yaaddoo akka diinni jedhu osoo hin taane saba kamiifuu gammachuudha. Kana hubachuun uummata Oromoo cina akka dhaabbattan waamicha isiniif goonee jirra.
Uummata Oromoo bal’aadhaaf:- Tarkaanfiin kun Guutuu Oromiyaa keessatti waan itti fufuuf guyyaa ibsi kun bahuu kaastanii haala sochii keessan akka to’attan isiniif dhaamna.
Injifannoon kan uummata oromooti!
Qeerroo bilisummaa Oromoo!!!!